Radio Sudoorawaz 95 Mhz विदेशमा रहेका नेपाली २४ सै घन्टा नेपालकै लागि खटिरहेका छन् : भवन भट्ट
नेपाल आउँदा एनआरएनएका प्रतिनिधीहरुले देश विकासका अनेक सपनाहरु बाँड्छन् । यद्यपी, ती सपनाहरु पूरा हुन सक्दैन् । पछिल्लो समयमा एनआरएनएको विश्वास केही खस्कदैं गएको अनुमान गरिएको छ । एनआरएनप्रति आम नेपालीको आशा, भरोसा र विश्वास रहेपनि धेरै उद्देश्यहरु अझै पुरा हुन सकिरहेका छैनन् । यतिबेला नयाँ नेतृत्वका लागि एनआरएनएका लागि दुई पटक उपाध्यक्ष भइसकेका भवन भट्ट अध्यक्षका लागि चुनावी दौडमा छन् । भट्टसँग इमेज च्यानलको ‘हटसीट’का लागि जगदिश खरेलसँग गरिएको कुराकानी अंश:
एनआरएनएका सदस्यहरुले बाँडेका सपनाहरु पूरा नभएकै हुन् ?
यसलाई कसरी बुझ्ने । म त एकदम सकरात्मक मान्छे हुँ । हामी विदेशमा संघर्ष गरिरहेका नेपाली हौं । एनआरएनए मार्फत विश्वभरका नेपाली एकजुट हुने प्रयासमा छौं । देशका लागि केही गरौं भन्ने उद्देश्य बोकेर अघि बढीरहेका छौं । ‘फर नेपाली, बाइ नेपाली’ अभियानमा छौं । हामी कमजोर मुलुकका नागरिक भएकाले संघर्ष गर्दै एकजुट भएर अघि बढीरहेका छौं ।
तपाईलाई के लाग्छ एनआरएनएले मुलुकका लागि जति काम गर्ने भनेको थियो, त्यो पूरा भएको छ ?
छैन पुरा भएको । हाम्रो आन्तरिक संयन्त्र मजबुद बन्न सकिरहेको छैन् । यसकै विकासका लागि हामी अघि बढीरहेका छौं । एनआरएनए स्थापना हुँदा लिएको उदेश्य बर्तमान परिस्थिती अनुसार पूरा गर्ने अभियानमै छौं ।
नेपालमा लगानी गर्न कत्तिको सुरक्षित छ ?
यसमा दुईवटा कुरा आउँछ । जोखिम र अवसर दुवै छ । लगानी गर्नु आवश्यक छ । जोखिम मोलेर फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।
एनआरएनएका लागि सरकारको सहयोग कस्तो छ ?
सरकारले सहयोग गर्न खोजिरहेको छ तर हाम्रो नीति अलिक पुरानै भएकाले यसका लागि केही परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । मुलुक राजनीतिक परिवर्तनमा अघि बढीरहेकाले केही समस्याहरु देखिएका छन् ।
एनआरएनएबाट धेरै अपेक्षा नगरेर ठिक्क मात्र अपेक्षा गर्दा कस्तो होला ?
हामी दुई बर्षमा एकपटक आएर देखाएको सक्रियतालाई मात्र नियालिन्छ । हाम्रो कस्तो संयत्र छ भने हाम्रो प्रत्येक देशमा एनसीसी छ । अर्को आइसीसी नेपालमा मात्र छ । यी मध्ये एनसीसी अत्यन्तै ब्यस्त छ । एनसीसीमार्फत विदेशमा रहेका प्रत्येक नेपाली २४ घन्टा नेपालकै लागि दौडिरहेका छन् । ३६५ दिन नै सक्रिय भएर लागिरहेका छन् ।
तपाई धेरै ब्यस्त ब्यवसायी भएकाले अध्यक्ष भएर एनआरएनए हाँक्न सक्दैन, भ्याउदैन भन्दैछन नी ?
१५ बर्षदेखि एनआरएनएमा खटिरहेको छु । दुई बर्ष सक्रिय हुन मलाई के आपत्ति ? नेतृत्वमा पुग्ने सधैं मौका आउँदैन । त्यसैले दृढ विश्वासका साथ सक्रिय हुनैपर्छ । दिल, बचन र कर्मले खट्नै पर्छ । कुनै कमजोरी छाडेर जाँदिन ।
तपाईले लगानी गर्नुभएको बीबी एयरवेज, सुरुङ मार्गलगायतका काम सफल भएनन् । अब एनआरएनएको नेतृत्व कसरी सफल होला ?
यी लगानीमा चुनौति थियो । असफल चाहिं भएको छैन् । मेरो जापानमा शेर्पा भन्ने रेस्टुरेन्ट थियो तर त्यो डुब्यो । त्यो डुबेकै कारण मैले अरु तीनसय रेस्टुरेन्ट चलाइरहेको छु । ब्यावसायका क्रममा सिक्दै जाने हो, चुनौति मोल्ने हो । म हारेको छैन ।
अध्यक्षमा तपाईको उम्मेदवारी के का लागि हो ?
एनआरएनएसँग नेपालीको धेरै अपेक्षा छ । मुलुकले धेरै आशा राखेको छ । ती आशा र अपेक्षाहरु पूरा गर्न मेरो उम्मेदवारी हो । म कुनै पार्टी र बर्गको उम्मेदवार होइन सबैको साझा उम्मेदवार हुँ ।
तपाई अध्यक्ष भएपछि के गर्नुहुन्छ ?
एनसीसी र आइसीसीबीचको निकटता बढाउँदै मुलुकको समृद्धिका लागि जुटछु । यतिबेला संचालनमा रहेका परियोजनाहरु पूरा गराएरै छाडछु । न्यून लगानी गर्न चाहने ब्यवसायीहरुलाई अभिप्रेरित गर्नेछु । नेपालमा लागि एकजुट हुने अवसर सिर्जना गर्दछु । नेपाल र नेपालीका निम्ती एकता कायम गर्दै अघि बढ्छु